Somaliland iyo Midowga Yurub oo kala Saxeexday Mashruuc lagu Horumarinayo Bed-qabka Taariikhda Faca-weyn ee Laas Geel - SomalilandPost
Home News Somaliland iyo Midowga Yurub oo kala Saxeexday Mashruuc lagu Horumarinayo Bed-qabka Taariikhda...
Somaliland iyo Midowga Yurub oo kala Saxeexday Mashruuc lagu Horumarinayo Bed-qabka Taariikhda Faca-weyn ee Laas Geel
Hargeysa (SLpost)- Xukuumadda Somaliland iyo Midowga Yurub, ayaa maanta si rasmi ah u kala saxeexday mashruuc loogu talo-galay ilaalinta iyo dhowrista taariikhda soo-jireenka iyo Aataarta Qadiimiga ah ee ku duugan Buurta Laasgeel oo masaafo 47-km jihada Woqooi-Bari kaga beegan magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland.
Heshiiska Mashruucan oo lagu daah-furay munaasibad ballaadhan oo ku qabsoontay Buurta Laasgeel, waxa goob-joog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), Safiirka Midowga Yurub Nickolas Berlanga, Safiirka dowladda Denmark, Wasiirro ka tirsan Xukuumadda Somaliland, madaxda Xarunta Dhaqanka Hargeysa, Maamulka gobolka Maroodijeex, aqoonyahan iyo marti-sharaf kale.
Mashruucan oo loogu talo-galay inuu socdo muddo 12-bilood ah, ayaa koobsanaya deyr weyn oo xayn-daab u noqonaya Buurta iyo Goobaha Taariikhiga ah ee Laasgeel, Jidad loo maro goobaha Dalxiiska, iyo tayaynta xirfadda hawl-wadeennada ka shaqaynaya, waxa fulinaya isla markaana gacanta ku haynaya Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa.
Ugu horeyn, waxa munaasibadda mashruucan lagu daah-furay hadallo ka jeediyey guddoomiyaha Gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed iyo guddoomiyaha degmada Laasgeel Mustafe Jabiye oo labadooduba soo bandhigay baahida loo qabo wax-ka-qabashada iyo ilaalinta Buurta si aan loo dhaawicin qiimaha taariikhda soo jireenka ah ee ku duugan Goobaha taariikhiga ah ee Laasgeel.
Guddoomiyaha Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa Dr Jaamac Muuse Jaamac oo halkaas ka hadlay, ayaa soo bandhigay muhiimadda gaar ahaaneed ee ay leedahay dejinta qorsheyaal lagu hirgelinayo badbaadada taariikhda faca-weyn leh ee Buurta Laasgeel.
“Laasgeel oo kaliya maaha ee waxaan ka fekerayey inta meelood ee dalkani leeyahay ee laga soo bilaabo Saylac ilaa Buurta Daallo taxan wixii loo qaban karayo, Laasgeel calaamad ayay noqotay, waxaanan ku faraxsanahay inay maanta halkan isugu nimaadno innagoo taabanayna, laakiin xusayna inta meelood ee aynu leenahay ee ay tahay inaynu badbaadinno. Shacab ahaan, xukuumad ahaan iyo saaxiibadeenna inala joogaaba waynu isku raacnay inaynu ilaashanno Laasgeel, waanaynu ilaashanaynaa,” Sidaa waxa yidhi Guddoomiyaha Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa, Dr Jaamac Muuse Jaamac.
“Waxaan idinla wadaagayaa farxadda aynu ku furayno mashruucan lagu ilaalinayo taariikhda qadiimiga ah ee Laasgeel oo ay iska leeyihiin shacabka Somaliland, waxaynu isugu nimi xuska iyo ilaalinta taariikhdaas si aanay ugu burburin gacanta jiilka soo socda oo aynu barno qiimaha ay leedahay”, sidaa ayuu yidhi Safiirka Midowga Yurub
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo gebo-gebadii munaasibadda hadal ka jeediyey, ayaa iftiimiyey muhiimadda hirgelinta mashruucani u leeyahay Shacbiga Somaliland iyo sidoo kale bad-qabka taariikhda faca-weyn ee ku duugan Buurta Laasgeel.
“Waanu soo dhawaynaynaa mashruucan lagu horumarinayo dhowrista taariikhda Laasgeel oo runtii magac weyn u soo jiidday Somaliland. Ciddii soo jeedisay qorshahan oo ah Jaamac Muuse Jaamac iyo saaxiibkeenan safiirka ah ee hirgelinteeda u soo diyaar-garoobay ee maalgelinta bixinaya iyo wasaaraddeenaas mar walba u heellan sidii loo horumarin lahaa, intaba waan u mahad-celinayaa”, sidaas ayuu yidhi Md Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici.
Gebo-gabadii munaasibadda, waxa halkaas si wada-jir ah heshiiska hirgelinta mashruucan u wada saxeexay Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga, Wershadaha iyo Dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad (Saajin) oo dhinaca xukuumadda u metelayay iyo Safiirka Midowga Yurub Nickolas Berlanga, waxaana saxeexa heshiiska goob-joog ka ahaa Guddoomiyaha Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa Dr Jaamac Muuse Jaamac oo gacanta ku haynaysa fulinta mashruuca.
Hirgelinta Mashruucan oo lagu tilmaamay maalgelintii u horeysay ee Caalami ah ee ay hesho Buurta taariikhiga ah ee Laasgeel oo sirta ku duugan ay soo shaac-bixiyeen khubaro u dhashay dalka Faransiiska baadhis ay Sannadkii 2002-dii ku sameeyeen taariikhda ku duugan Buurta Laasgeel oo lagu tilmaamay inay soo taxnayn muddo lagu qiyaasay inta u dhaxaysa Shan Kun ilaa Toddoba Kun oo Sanno.